Safal Khabar - भरतपुरमा भएको बम बिष्फोट र आशंका
शनिबार, ११ जेठ २०७६ (Saturday, 25 May, 2019)
भरतपुरमा भएको बम बिष्फोट र आशंका
बुधबार, २९ फागुन २०७५, १५ : १७
चितवन । मंगलबार मध्यरातको समयमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ को कार्यालयमा बम बिष्फोट भयो । बिष्फोटबाट कार्यालयको कागजपत्र, फर्निचर तथा झ्यालढोकाको सिसाहरु फुटेका छन् । घटनाको अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मा लिएको छैन ।
बिष्फोटबाट वडा कार्यालयमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार वडा कार्यालयमा बम बिष्फोटसँगै आगजनी गराउन खोजीएको बुझिएको छ । बिष्फोटमा प्रयोग भएको एलपि ग्याँसको सिलिण्डरसँगै दुईवटा टायरलाई पनि प्रयोग गरिएको छ । अज्ञात समूहले विष्फोटपछि कार्यालयमा भएका कागजपत्रहरु नष्ट होस् भन्ने उद्देश्यले टायरलाई सल्काएर सिलिण्डरमा जोडेर कार्यालबाट निस्किएको देखिन्छ । सो समूहले कार्यालयको पछाडिपट्टीको भागबाट सुरक्षित रुपमा ढोका फोडेर सबै महत्वपूर्ण कागाजातहरुलाई ‘प्यासेज’ मा राखेर सिलिण्डर बिष्फोट गराएको छ ।
स्थानीयका अनुसार बिष्फोट राती ११ः५५ बजे भएको थियो । बिष्फोट भएपछि कार्यालयमा ठूलो आवजसँगै आगोको मुस्लो निस्किएको थियो । रातीको करिब १ बजेतिर भरतपुर महानगरबाट गएको दमकल र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो ।
घटना लगत्तै बम बिस्फोट गराउने घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । घटनापछि राती र आज बिहान गरी ६ जना लाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिह राठौरले जानकारी दिनुभयो । छानविन र अनुसन्धान चलिरहेकोले उनीहरुको पहिचान अहिले नखुलाईने राठौरले बताउनुभयो ।
बिष्फोटमा विप्लव समूहको संलग्नताको आशंका
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ मा भएको विष्फोटमा विप्लव समूहको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विप्लव नेतृत्व नेकपा आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही घण्टापछि नै त्यसको विरोधमा यो बिष्फोट गराएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । स्थानीयका अनुसार यही कार्यालयमा यो सँगै ३ पटक बम बिष्फोट भएको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला पनि बिष्फोट भएको थियो । यही कार्यालयमा ३ पटकसम्म बिष्फोट हुनुलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग व्यक्तिगत मनमुटाव थियो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । कार्यालय ५ का वडा अध्यक्ष पदमपाणि सुवेदी अहिले कोरियाको भ्रमणमा छन् । अध्यक्ष नभएको समयमा घटना घट्नु अर्को रहस्यमय कुरा हो । पछिल्लो पटक विप्लव समूहको नेकपाले विभिन्न स्थानमा बम बिष्फोट गराउने काम गरीरहेकाले यो घटनामा विप्लव कै हात रहेको अधिकांशले आशंका गरेका छन् । अर्को विषय यस समूहले आफ्ना कार्यकतालाई सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै आह्वान गरेको नेपाल बन्द सफल बनाउन यस्तो गरेको हुन सक्छ । केही समय यता नेपाल बन्दको प्रभाव चितवनमा त्यति नदेखिने गरेकाले बन्दलाई सफल बनाउन एक दिन पहिले नै बम बिष्फोट गराएर जनतालाई त्रासमा राख्न खोजेको बुझिन्छ ।
यसरी मनाइँदैछ चितवनमा गणतन्त्र दिवस
चितवनमा पनि गणतन्त्र दिवस मनाइने भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीको...
मकैको बोटमा कीरा लागेपछि किसान चिन्तित
मकैको बोटमा कीरा लागेपछि राप्ती नगरपालिका वडा...
अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्यको सहसंयोजकमा चितवनका दवाडीको उम्मेदवारी
एनआरएनए अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितिको सहसंयोजकमा...
बालिका बलात्कार गर्नेहरु धमाधम पक्राउ
बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरी फरार रहेका चितवनका...
अर्थमन्त्रीज्यू, वृद्धभत्ता बढाउँदा स्रोतले धान्छ कि धान्दैन ?
ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्र किन ठाने आफैँलाई असुरक्षित ?
१. जस्तो रसायन त्यस्तै स्वभाव
२. प्रभासको साहोमा सलमानको केमियो !
३. मादलमा भविष्य खोज्दै २१ वर्षीया युवती अनिता
४. महोत्सव गर्न किन नदी किनार छोड्न चाहन्न उद्योग वाणिज्य संघ ?
५. बसको ठक्करबाट चितवनमा एक जनाको मृत्यु
६. १८ हजार नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण
७. युवाहरूले इमानदारिताका साथ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ: महानगर प्रमुख दाहाल
८. चीनमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा दश जनाको मृत्यु
९. लोथरदेखि सौराहसम्म नौ अर्बमा स्थायी तटबन्ध निर्माण गरिंदै
१. अर्थमन्त्रीज्यू, वृद्धभत्ता बढाउँदा स्रोतले धान्छ कि धान्दैन ?
२. शुभेच्छा बचत तथा ऋण सहकारीको लुट धन्दा : १२ हजार ३३५ रुपैयाँको ६ महिनाको ब्याजमात्रै १० हजार ४१८ रुपैयाँ
३. ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्र किन ठाने आफैँलाई असुरक्षित ?
४. यसरी बढाउनुहोस्, स्मरणशक्ति
५. डिआइजीकै घर लुट्नेलाई काठमाडौंमा गोली हानी नियन्त्रण
६. शिक्षिका जो कलिला विद्यार्थीबाट यौन प्यास मेटाउँछिन्
७. को हुन्, स्मृति इरानी ? जसले राहुल गान्धीको गढमा जितिन्